Fara-fanànana An’i Holly Betaudier, Lehilahy Iray Nanokana Ny Fiainany Hampiroboroboana Ny Fahasamihafàna Ara-Kolontsaina Tao Trinidad & Tobago · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Jona 2016 8:32 GMT
Pikantsary tamin'ny lahatsary iray an'ireo mpiteny patois ao Trinidad sy Tobago, manasongadina ilay olomalazan'ny kolontsaina, Holly Betaudier.
Nodimandry ny 30 May 2016 teo amin'ny faha-91 taonany ny iray amin'ireo olomalaza ara-kolontsaina ankamamiana indrindra ao Trinidad sy Tobago, Holly Betaudier (fantatra ihany koa amin'ny hoe ‘The Arima Kid’, pimaso ho an'ilay tanàna nahaterahany).
Mpisava làlana iray tamin'ny fahitalavitra izy, izay nampiantrano ny iray tamin'ireo fandaharana nandeha ela indrindra natao ho an'ny talenta ao an-toerana, Scouting for Talent, izay nanampy tamin'ny fanosehana ny asan'ireo mpiangaly mozika maro, indrindra fa ny gadona calypso. Izy dia mpiondana ihany koa ny mozika parang ary hatramin'ny farany teo, nampiantrano fandaharana iray tao amin'ny fampielezampeo, Toute Bagai (fiteny patois midika hoe “ny zavatra rehetra”), izay sehatra iray nataony hitenenana amim-pireharehàna ny iray amin'ireo fiteny efa miala aina ao Trinidad.
Teo am-pandrenesana ny fahafatesany, avy hatrany ireo mpisera aty anaty aterineto dia nanomboka fanomezana voninahitra ho azy. Vernon O'Reilly Ramesar, mpanao gazety sady bilaogera, nandefa ny tafa iray nifanaovany tamin'i Betaudier, niantsoany azy ho “famintinana” no sady “goavan'ny kolontsaina ao T&T”.
Amin'ny fizaràna ny lahatsoratr'i Leslie Ann Boiselle tao amin'ny Facebook, nilaza ilay endrika fantadazan'ny calypso, David Rudder hoe:
Mandria am-piadanana ry Holly Betaudier. Nomenao anay izay rehetra azonao natolotra an'i Trinbago. Misaotra anao Andriamatoa.
Nipao-tsatroka tamin'i Betaudier ilay onjampeo malaza ao an-toerana 96.1 WEFM, nanao azy ho toy ny “vahiny tsy nisy toa azy tamin'ireo seho ara-kolontsaina tsara indrindra niorina teto amin'ny firenena, Scouting for Talent”:
Ny fitiavana natolotr'i Holly B ho an'ny kolontsaina eto an-toerana dia nanomboka hatrany amin'ny andron'ny fahazazàny tao Arima. Nandray anjara tamin'ny sehatry ny fampahalalambaovao sy ny fialamboly izy tany amin'ny 1940, tao amin'ny tambajotran'ny onjampeon'ny Tafika Amerikàna, WVDI. Nanetsiketsika ny fahilavaitra izy rehefa notokanana ny TTT tamin'ny 1962 ary nanampy nampivoatra ny filamboly teto an-toerana sy ny seho ara-kolontsaina izay nahitàna taratra an'i Trinidad sy Tobago.
“Nasehon'i Holly tamin'ny alàlan'ny ‘Ny Mason'ny Firenena’ ny tena Trinidad sy Tobago marina, mba ho hitan'ireo andian-taranaka nihaino nanerana ny firenena, tamin'ny famoronana tetezana sy fahatakarana ny fahasamihafàna misy ao Trinidad sy Tobago. Holly B iray foana hatrany no hisy,” hoy ny nosoratan'ny National Carnival Commission (NCC) momba an'i Holly B, izay noraisina ho mpamaky lay tamin'ny indostrian'ny fahitalavitra tao T&T.
Nanome voninahitra ilay iray isan'ny tena mpanohana azy ihany koa ny Fikambanana Nasionalin'ireo Parang ao Trinidad & Tobago :
Feno fankasitrahana azy tanteraka izahay tamin'ny fandraisany anjara tsy voavidy vola tamin'ny endrika zavakanto Parang, indrindra fa ilay fandaharany mpisava làlana ‘Holly's Parang Bandwagon’ izay nalefa tao amin'ny fahitalavitr'i Trinidad sy Tobago (TTT). Faly ihany koa izahay fa voatahiry ho velona foana ireo lova navelan'Ing. Betaudier amin'ny teny Parang satria mitohy amin'ny alàlan'ny zanany lahy Holly Jr. ny fandaharana, ny zanany izay nandray anjara foana ho toy ny vahiny tamin'ny Fetibe Junior Parang fanaonay isantaona.
Louis Lee Sing, Ben'ny tanàna fahiny tao Port d'Espaigne, izay ny onjampeony no mandefa ny fandaharan'i Betaudier, dia nizara fahatsiarovana mafàna momba ny fisakaizan-dry zareo :
Tsy ilay olona mifanena aminao fotsiny i Holly Betaudier ka tadidinao amin'izay fotoana izay […] Tsotra, maha-tehotia, ary feno fitahiana manana fambaboana tsy hay tohaina […] rehefa nitombo ho lehilahy lehibe izy dia nandray an-tànana olona maro satria lasa olona fakàna torohevitra mahasoa, raha toa ianao maniry ny hanomboka asa amin'ny sehatry ny fialamboly. […] Be herimpo i Holly ary io Betaudier mpilalao zavamaneno varahina io, no namorona ny marika – Holly B!
Namorona tetezana mampifandray ny andiany nisy azy sy ireo taranaka nifandimby izy, ary tao anatin'ireo taona niainany taty aoriana dia nanome sofina mihaino ho azy ireo, ny fahafahana mihaino ny tantara am-bava avy aminy, ary tsy izay ihany, fa ireo zavatra niainan'ireo mpankanto maro tany am-boalohany izay nandoko ny karipetran'ny fiainana tao Trinidad sy Tobago!
Gayelle TV, iray amin'ireo vitsivitsy nanokana fandaharana novokarina tao an-toerana, dia nanàla satroka ihany koa ho an'i Betaudier:
Vaovao ratsy no nentinay nifoha io maraina io. Mandria am-piadanana Dadatoa Holly. Iray amin'ireo olona nahafinaritra indrindra mety ho nahafinaritra anao ny nifanena taminy.‪#‎ArimaKid‬ ‪#‎ScoutingForTalent‬. ‪#‎TTT‬ ‪#‎SweetParang‬. Misaotra amin'ny zavatra rehetra.
Mazava ho azy, fa nandona mafy ny firahalahian'ireo media ny fahafatesan'i Betaudier ; saingy ny dindony dia tsapa eny anatin'ny habaka rehetra amin'ny fiainan'ny firenena, miaraka amin'ireo fiarahana miory ofisialy avy amin'ny governemanta sy ny mpanohitra noho ny fahalasanany.
Nalahelo ihany koa ny sasany mpampiasa Facebook izay voakasiky ny fahatsorana sy ny fitiavan'i Betuadier ny kolontsaina ao an-toerana. Hoy i Brenda Baptiste :
Namoy mpanompo goavana sy lehibe tokoa i Trinidad & Tobago sy Karaiba amin'ny ankapobeny.
Nampian'i Mark Owen hoe :
Mahatohina ny filazàna hoe tia ny kolontsaintsika izy…izy no kolontsaintsika…misaotra tamin'ny fandraisanao anjara […] ho tsaroanay ianao…
Ao amin'ny bilaogy iray natokana hanomezana voninahitra ireo mpisava làlana ny fandefasana tamin'ny alàlan'ny fahitalavitra voalohany tao amin'ny firenena, ny Trinidad and Tobago Television (TTT), i Beatudier izy tenany mihitsy no nampahatsiahy ny niainany ny hoe naha-isan'ny tao anatin'izany hetsika izany azy — mivaky toy ny fanaovam-beloma farany ilay izy :
Nandritry ny taona maro, saiky tapitra nisy fahitalavitra daholo ny efitrano fandraisana vahiny, ary tena nirehareha sy feno voninahitra aho tamin'ny naha-vahiny ahy tamin'ireo fandaharana nalefa isan-kerinandro, raha tsy mihoatra noho izany aza. Ireo mpanolotra tao no nitondra hafaliana, alahelo, vaovao, kolontsina ary fanabeazana ho an'ny mpijery fahitalavitra. Fantatry ny mpijery rehetra amin'ny fanampin'anarany ihany koaireo mpanolotra fandaharana eo amin'ny fahitalavitra, toy ny hoe fianakaviambe iray.
Ary avy eo, indray andro, toy ny hoe niparasaka izao tontolo izao. Nisy ny alahelo, tomany ary noho ny fitahian'Andriamanitra dia nisy ny fanantenana. Tsia, tsy nifarana izao tontolo izao, fa ny TTT, nanankinantsika ny fianana ihany, izay ampahany sy pitiny kely amin'ny fiarahamonina nandritry ny 40 taona hafahafa, nifarana tampoka. Tafapetraka ny fifaninanana.
Izahay no voalohany, nanao izay tratra ary ankehitriny betsaka ireo azo arahana. Tamin'ny andro nanakatonana azy, betsaka ny fifamihimpihinana sy ny orokoroka, hatramin'ny fahatsiarovana ireo fihetsehampo, ary avy eo izahay samy nandeha tamin'ny làlanay avy. Efa lasa ny sasany taminay ary noho ny fahasoavan'Andriamanitra, ny sasany aminay mbola eny ihany. Fiafaranà vanimpotoana iray ihany iny – Hotahian'Andriamanitra e.